Shiinaha Thalidomide soosaarayaasha iyo alaableyda | CPF
Thalidomide Daawada Oncology USP / EP
Thalidomide waxaa loo soo saaray daroogada daweynta, wakiilka difaaca jirka iyo sidoo kale waxaa lagu baarayaa daaweynta calaamadaha kansarada badan. Thalidomide wuxuu xakameynayaa E3 ubiquitin ligase, taas oo ah dhisme CRBN-DDB1-Cul4A.
Thalidomide waxaa markii hore loo dallacsiiyaa inuu yahay daawo dejiye ah, wuxuu joojiyaa cereblon (CRBN), qayb ka mid ah cullin-4 E3 ubiquitin ligase complex CUL4-RBX1-DDB1, oo leh Kd of ∼250 nM, waxayna leedahay astaamo difaaca jirka, anti-bararka iyo anti-angiogenic.
Thalidomide waxaa markii hore loo dallacsiiyaa inuu yahay daawo dejiye ah, wuxuu leeyahay astaamo difaaca jirka ah, anti-bararka iyo anti-angiogenic, wuxuuna bartilmaameedsadaa cereblon (CRBN), qayb ka mid ah cullin-4 E3 ubiquitin ligase complex CUL4-RBX1-DDB1, oo leh Kd of ∼250 nM . Thalidomide (50μg / mL) waxay awood u siineysaa waxqabadka anti-buro ee icotinib kahortaga faafitaanka labada unug ee PC9 iyo A549, saameyntana waxay kuxirantahay apoptosis iyo unuga guuritaanka. Intaa waxaa dheer, Thalidomide iyo icotinib waxay xakameysaa waddooyinka EGFR iyo VEGF-R2 ee unugyada PC9 .
Thalidomide (100 mg / kg, po) wuxuu joojiyaa dhigaalka kolajka, hoos u-hagaajiya heerka muujinta mRNA ee α-SMA iyo collagen I, waxayna si weyn u yareysaa cytokines-ka pro-inflammatory ee jiirka RILF. Thalidomide waxay yareysaa RILF iyadoo loo marayo xakamaynta ROS iyo hoos u dhigista TGF-β/ Wadada Smad waxay kuxirantahay xaalada Nrf2 . Thalidomide (200 mg / kg, po) oo ay weheliso icotinib waxay muujineysaa saameynta ka hortagga burooyinka ee jiir qaawan oo sita unugyada PC9, xakameynaya koritaanka burooyinka iyo kor u qaadida dhimashada burooyinka .
Xiga: Velpatasvir (PVP)